News Feed Archives | Page 10 of 41 | Frontier Myanmar
ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဝါဒကို အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ အပြင်းအထန် ထိုးနှက်ဝေဖန်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၂၀၁၈-၁၉ တွင် ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိမည်ဟု ဇွန် ၁၈ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သည့် မြန်မာ့စီးပွားရေး စောင့်ကြည့်အစီရင်ခံစာတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ခန့်မှန်းထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အလှုပ်အရမ်းများခဲ့သည့် မြန်မာ့စီးပွားရေးအခြေအနေသည် ယခုအခါ “တဖြေးဖြေးချင်း တည်ငြိမ်လာကာ အရှိန်ပြန်ရလာသည်”.
တနင်္သာရီရှိ လျှပ်စစ်စီမံကိန်းအား ပမာဏလျှော့ချရန် Total နှင့် Siemens တို့ အဆိုပြု
သောမတ်စ်ကင်းန်နှင့် ကျော်ရဲလင်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ၁,၂၃၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအား ပမာဏလျှော့ချရန် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် ဥရောပကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုက အဆိုပြုလိုက်သည်။ အစိုးရနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများ ရပ်ဆိုင်းထားစဉ် ၎င်းတို့က ထိုသို့ အဆိုပြုလိုက်သည်။ သို့သော်လည်း ပြန်လည်သုံးသပ်ဖော်ပြသည့် အဆိုပြုချက်မှာ လက်ခံရန်မဖြစ်နိုင်ဘဲ စီမံကိန်းမှာ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ သို့မဟုတ်.
ကျောက်ဖြူစီမံကိန်းမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဝယ်ယူရေး သဘောတူညီချက် မကြာမီရရှိနိုင်
သောမတ်စ်ကင်းန်နှင့် ကျော်ရဲလင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူတွင် ၁၃၅ မဂ္ဂါဝပ် ထွက်ရှိမည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစီမံကိန်းမှ ဓာတ်အားဝယ်ယူရေး သဘောတူညီချက်ကို ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက် ရရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း အဆိုပါ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းစု၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ Supreme Group နှင့် တရုတ်နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Sinohydro.
သောမတ်စ် ကင်း(န်) နှင့် ကျော်ရဲလင်း ရေးသားသည်။